उग्र नीतिका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू असफल: कृष्णराज वर्मा - Nepal Readers
Home » उग्र नीतिका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू असफल: कृष्णराज वर्मा
उग्र नीतिका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरू असफल: कृष्णराज वर्मा
by कृष्णराज वर्मा
कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात
धानको ऋण लगाउने प्रयोगपछि समाजको शोषण बुझ्ने मौका मिल्यो र मेरो झुकाव कम्युनिष्टतिर बढ्दै गयो । कम्युनिष्ट पार्टीमा मेरो पहिलो संलग्नता अनिकाल कम गर्न भारततर्फ धान र चामल निकासीमा रोक लगाएबाट सुरू भयो। यो सन् २००८ कोे कुरो थियो। त्यस बखत हाम्रो गाउँमा अनिकाल पर्‍यो। उतिखेर हाम्रो गाउँघरमा उब्जनी हुने धान भारततर्फ निकासी हुने चलन रहेछ । भारततर्फ सीमा छेउका ठाउँहरूमा पनि अनिकाल थियो । त्यसकारण धानको स–सानो पोका बनाएर टाउकोमा बोकी सीमा पारी लगेर बेचिँदो रहेछ । दिनमा दुइ/तीन पटक ओसार्दा राम्रै कमाई हुने भएकाले त्यो धन्दा व्यापक रुपमा भयो । यति व्यापक भयो कि हामीकहाँ अन्न नै नरहने अवस्था भयो । कमाई धेरै भएपछि मरिमेटेर धान लैजानेहरू धेरै भए ।
त्यसलाई रोक्न हामीले सय/डेढ सय जति युवा जम्मा पारेर एउटा समूह बनायौँ र धान र चामल निकासी बन्द गराउन लाग्यौँ । दोस्रो काम, मान्छेलाई बुझाउन लाग्यौँ । यी दुईवटा आन्दोलनबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात ग¥यौँ ।
पुष्पलालका ‘असफल’ नीति
पुष्पलाल श्रेष्ठसँग मेरो भेट २००८ सालमा सप्तरीमै भयो । उहाँ हामीकहाँ नै आउनुभएको थियो । उहाँसँग धेरै वर्ष सँगै रहेर काम गरियो । एउटै कमिटीमा रहेर काम गर्‍यौँ । २०१० सालमा म पनि कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य थिएँ । २०१९ सालपछि उहाँसँग भेट भएन । हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद नै भयो । उहाँ र हामी अलग भयौँ । २०१७ सालमा हामी पार्टीको डेलिगेसन लिएर मस्को गएका थियौँ । रुसको मस्कोमा अन्र्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलन भएको थियो । त्यहाँ ८१ देशका कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू आएका थिए । हाम्रो पाँचजनाको डेलिगेसन गएको थियो ।
हामी पुष्पलालजीसँग पहिलेदेखि नै फरक भएका थियौँ । व्यक्तिगत भन्दा पनि पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर हामीबीच फरक थियौँ। उहाँलाई सन् १९५२ अर्थात वि. सं. २००९ सालमा पार्टीको नेतृत्वबाट हटाइयो । त्यो फागुन महिनातिरको कुरा हो । २०१० सालमा हामीले अर्को सम्मेलन गरिहाल्यौँ । त्यसबेलासम्म उहाँले लिनुभएको नीतिबाट कम्युनिष्ट पार्टीले कुनैपनि सफलता हात पार्न सकेन ।
आम मान्छेका कथा लेख्ने प्रेमचन्द : जसको कृति अंग्रेजले जलाइदिएका थिए
फूलमाला लगाएर संसदभित्र छिरेको ‘सबाल्टर्न’ खासमा सत्ता बाहिरै हुन्छ
विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनका संकेतहरु
किनभने १५ अगस्ट १९४९ अर्थात् वि.सं.२००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछि उहाँका नीतिका कारणले आन्दोलनले धेरै अप्ठ्याराहरू भोग्नुपर्‍यो। त्यसपछि सन् १९५२ सालमा पार्टीको नेतृत्वबाट हटाइयो । उहाँमाथि एउटैमात्रै अभियोग थियो कि उहाँको नेतृत्व सफल भएन । उहाँका नीतिहरू स्पष्ट भएनन् । उहाँले सुरुमा समाजवादी क्रान्तिको नारा दिनुभयो। नेपालजस्तो पछ्यौटे मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्दा एकैचोटी समाजवादी क्रान्तिको नारा दिइनु सान्दर्भिक भएन ।
उहाँका नीति हाम्रो सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग मिल्दाजुल्दा थिएनन् । त्यसकारण २ वर्षपछि त्यो नीति परिवर्तन गर्नुभयो । त्यसपछि पनि उहाँले चीनियाँ मार्काको नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिन पुग्नुभयो । तर चीनमा जसरी किसान क्रान्तिकै नारा दिएर हतियार उठाइएको थियो, त्यसप्रकारको हतियार उठाएर क्रान्ति गर्ने कुरा पनि गर्नुभएन ।
एक प्रकारले वैधानिक रुपबाट क्रान्ति नै परिवर्तित गरेर नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको नीति उहाँले लिनुभयो । त्यस नीतिका २ वटा परिणाम देखिए । पहिलो, पार्टी प्रतिबन्धित भयो । उहाँकै नीतिका कारण २००८ साल माघ महिनामा कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित भयो । दोस्रो, २००९ सालमा आएर प्रजापरिषदसहितको संयुक्त मोर्चा भंग भयो । किनभने उहाँले अति उग्र नीति लिन पुग्नुभएको थियो ।
उहाँले कांग्रेसको अधिवेशन भंग गर्ने पनि नीति लिनुभएको थियो । कांग्रेसको वि.सं.२००९ सालको जेठ महिनामा अधिवेशन थियो। त्यो अधिवेशनमा मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको झगडा थियो। त्यो झगडाले प्रभावित कांग्रेसमा हामीले भूमिका खेल्न पुग्यौँ। हाम्रो पार्टी प्रतिबन्धित थियो। त्यसकारण प्रजा परिषदकै तर्फबाट कांग्रेसको अधिवेशनलाई भंग गराउनका लागि गर्नु नगर्नु सबै प्रकारका काम सुरु गर्‍यौँ । त्यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी न थियो । त्यसको अधिवेशनलाई भंग गर्ने भूमिका खेल्नु गलत कदम थियो। त्यसैकारण मोर्चाबाट प्रजापरिषद निस्किदियो । कम्युनिष्टहरू असाध्यै उग्र रहेछन् भन्दै उ बाहिरियो । पुष्पलालसँग मेरो असहमति हुनुका कारण पनि यिनै हुन् ।
उहाँका नीति नै प्रष्ट नभएका कारण ३/४ वर्षसम्म हामीले कुनै उपलब्धि हात पार्न सकेनौँ । अर्कोतर्फ हामीले के थाहा पायौँ भने भारतको कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यस अवधिमा यी सबै गल्ति गरेका रहेछन् । त्यही गल्तिको सिको हामीले गरेका रहेछौँ । उसले सन् १९४८ मा समाजवादी क्रान्तिको नारा दियो, हामी त्यो कपी गर्न पुग्यौँ ।
वास्तवमा हामीले हाम्रो समाजको अवस्था हेरेर र विभेदको विवेचना गरेर लिएको नीति थिएन । हामीले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको देखासिकीमात्र गर्‍यौँ । नक्कल गर्दा हामी यी सबै परिणामहरू भोग्न पुग्यौँ । यसकारणले गर्दा यस्तो नीतिबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । जसलाई उहाँले स्वीकार गर्न मान्नुभएको थिएन।
त्यसकारण वि. सं. २००९ सालमा हामीले उहाँलाई नेतृत्वबाट हटायौँ। भारतको कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि जसको नेतृत्वमा ती सबै गल्तिहरू भएका थिए, उनीहरूलाई हटाईएको थियो । यी सब कुराहरू आज म जति गम्भिरतापूर्वक म भनिरहेको छु, त्यस्तै गम्भिर रुपमा हामीले त्यसबेला कुरा बुझेका थिएनौँ । त्यतिबेलाको समय त्यस्तो थियो ।
नेकपाको पहिलो महाविधेशन
चुनाव वि.सं.१५ सालमा भयो, उतिखेर पुष्पलाल हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीले उहाँलाई महासचिवबाट हटायौँ, तर पोलिटव्युरोमा राख्यौँ । किनभने हामीलाई भारतीय पार्टीहरूले ‘यो नीतिमा परिवर्तन गर्नुस्, हामीकहाँपनि यही नीति लिएका थिए, हामीले पनि परिवर्तन गर्‍यौँ र नयाँ आफ्नो बाटो, आफ्नै मुलुकअनुसारको अख्तियार ग¥यौँ, त्यसकारण तपाईहरू पनि आफ्नै मुलुकअनुसारको अख्तियार गर्नुस्’ भनेर सल्लाह दिएका थिए। अब त्यो गरेपछि पार्टी चाहिँ नफुटोस् है, भरसक पार्टीमा सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नुस् भनेर उनीहरूले भने । यसपछाडिका अरु धेरै कुराहरू छन् ।
त्यसकारण हामीले पुष्पलालजीलाई कमिटीबाट नहटाउने, नेतृत्वमै राख्ने कुरा गर्‍यौँ, त्यसै आधारमा पहिलो महाधिवेशनको दस्तावेजलाई पनि संयुक्त बनाउने कोशिस गर्‍यौँ –एकताको दस्तावेज । वि.सं.१० सालमा भएको थियो नेकपाको पहिलो महाधिवेशन । त्यसमा केही कुराहरू पुष्पलालका पनि स्वीकार गरेर राख्यौँ, जस्तैः किसानसम्बन्धी कुराहरू। क्रान्तिका सन्दर्भमा जति आलोचनात्मक कुराहरू पुष्पलालजीले भन्नुभएको थियो, त्यत्तिकै आलोचनात्मक कुराहरू नराखेता पनि केही उनका आलोचनाहरूलाई पनि राख्यौँ, पछि पुष्पलालजीले पनि अपनत्व गर्न सक्नुहोस् भनेर । अनि राजनीतिक रुपमा पूरै नयाँ किसिमबाट प्रस्तुत गर्‍यौँ । त्यो दस्तावेजमा एउटा शब्द पनि परिवर्तन भएन। जस्तो दस्तावेज थियो, त्यस्तै पास भयो। किनभने त्यो एकताको दस्तावेज थियो।
संसदीय वा विधानसभाको चुनाव
वि. सं. २०१५ सालमा भएको चुनावमा हामीभित्र एउटै कुराको मतभेद संसदको चुनाव कि संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्नेमा थियो । संविधानसभाको भनिएपनि संसदीय चुनाव भयो । तर २००७ सालमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने घोषणा गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनले गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइदिने भनेका थिए। राजाले त्यसबेलाको समयमा गरेको यो घोषणालाई पत्याउन सक्ने अवस्था भने थिएन।
उनले नबुझेर साधारण तरिकाले भनेका हुन् । भारतले जे लेखिदियो, त्यही घोषणा गरेका हुन् । त्यसबेला भनिदिए, त्यो एउटा कुरा हो । तर वास्तवमा गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने कुरा अर्को हो । हामीले त्यसरी लिनुपर्दछ।
पुष्पलाल संविधानसभाकै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। हामी लगायत कांग्रेसले पनि संविधानसभाकै नारा दिँदै आएका थियौँ। तर पछि कांग्रेसले संविधानसभाको नारा छोडिदियो। प्रजापरिषद्लगायत अरु पार्टी पनि विधानसभाको कुरा पनि गर्दैनथे। हाम्रो भनाई के थियो भने सबैले संसदीय चुनावको पक्ष लिइसकेका बेला हामीले मात्रै संविधानसभाको चुनाव गर्ने नारा लिएर चुनाव बहिस्कार गर्न पुग्यौँ भने त्यो गल्ति हुन्छ। यसरी अघि बढ्दा हाम्रो सहभागिता हुँदैन र पलायन हुने डर हुन्छ । त्यो त एउटा कोर्ष थियो, पछि भोलि संविधानसभाकै नारा दिएर पनि जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर हामी लागेका थियौँ।
त्यसै क्रममा वि.सं. २०१४ सालमा चुनावको मिति तय गर्न दबाब दिँदै सत्याग्रह आन्दोलन भयो। बिपि कोइरालालगायतले सत्याग्रहमा भाग लिए। त्यसमा हामी पनि सामेल भयौँ। हामी कुनै मौका पाउने वा नपाउने नहेरी जबर्जस्ती त्यो सत्याग्रहमा भाग लिन पुग्यौँ । सत्याग्रहमा भाग लिनु र आन्दोलन गर्नु हाम्रो अधिकार हो भनेर गयौँ भने त कांग्रेस हामीलाई सँगै लिएर जान बाध्य हुन्छ भन्ने मत हाम्रो थियो। तर हामीले विरोध ग¥यौँ भने उल्टो फस्ने सम्भावना थियो । त्यसमा पनि विवाद हुँदाहुँदै पनि हामी सहभागी भयौँ र चुनावको तिथि निर्धारण गरियो ।
त्यो बेलाको चुनाव
वि.सं. २०१५ सालको समयमा जनसंख्या कम भएपनि चुनावमा राम्रै जनसहभागिता भएको थियो । त्यो चुनावमा हाम्रो ठूलो गल्ति एउटै कुराको भयो, हामीसँग अनुभव थिएन र हाम्रो तयारी पनि थिएन । आर्थिक व्यवस्था पनि थिएन । ६ सय रुपैयाँले सप्तरीमा ६ सिटको निर्वाचन लडेका थियौँ । हामीसँग ६ सय रुपैयाँ र लिथोमेसिनमात्रै थियो। रातभरि पर्चा छाप्थ्यौँ, दिनभरी पर्चा लिएर छर्न जान्थ्यौँ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा लड्यौँ । त्यो रकम चन्दाबाटै संकलन भएको थियो ।
हामी सप्तरीमा हारेपनि सबै ठाउँमा दोस्रो भएका थियौँ। कुनैमा १ सय ७, कुनैमा २ सय र कुनैमा ३ सय भोटले हारेका थियौँ । देशभर जम्मा सिट १ सय ९ सिटमा निर्वाचन भएको थियो । जसमा हाम्रो पार्टीले ४ सिट जितेको थियो । रौतहटबाट १, बाराबाट १, पाल्पाबाट १ र पाटनबाट १ सिट जितेका थियौँ । युवाहरू बढी जुट्न सकेको ठाउँमा हामीले जित्न सक्यौँ।
कांग्रेसलाई भारतबाट धोका
वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेपछि गर्नुपर्ने आन्दोलनमा पनि पुष्पलाल र हामीबीच कुरा मिलेन । पुष्पलालजी राजाको कदम तानाशाही भयो र यसको विरोधमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर विद्रोह गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो। कांग्रेसको विरोध स्वभाविक थियो । किनभने उसको सत्ता नै भंग गरेर राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। कांग्रेस उग्रविरोधी हुनु स्वभाविक नै थियो ।
हाम्रो भनाई के थियो भने कांग्रेसको विरोध र हाम्रो विरोधमा फरक हुनुपर्छ । हामी कांग्रेसको पोजिसनमा थिएनौँ। हामी सत्ता लिएर बसेको शक्ति होइन । हामी त बाहिर कांग्रेसकै विरुद्ध लडेर बसेका थियौँ। राजा र कांग्रेसकै विरोध गरेर बसेका थियौँ । त्यसकारण हाम्रो विरोधको स्तर र उसको विरोधको स्तर फरक थियो ।
वि.सं.२००७ को क्रान्तिमा जसरी भारतबाट हतियार लिएर आन्दोलन गरिएको थियो, राजाको कुपछि त्यस्तै क्रान्ति गर्ने मनस्थितिमा थियो कांग्रेस । भारतले मद्धत गर्छ र भोलि नै सत्ता पल्टाउँछौँ भने दाउ थियो उसको । तर हामीलाई त भारतले हतियार दिदैँन थियो । किनभने हामी त कम्युनिष्ट थियौँ । हामीलाई मरिगए पनि हतियार दिदैँन थियो ।
पुष्पलालजीले १५ सेम्टेम्बर, १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, त्यो बेला कुनै पार्टी नै खोल्न पाउने अधिकार थिएन । भारतमा भने मनग्यै कम्युनिष्ट पार्टी थिए । त्यहाँ त आन्दोलन र विद्रोहहरू भइरहन्थे । हामीकहाँ चाहिँ थिएन । ७ सालको क्रान्तिमा भारतीय समाजवादीहरू पनि सहभागी भएका थिए। तर ‘कन्ट्रोल’ भने भारतीय कांग्रेसले नै गरिरहेका थिए ।
राजा त्रिभुवन ७ साल, कात्तिक २२ गते दरबार छोडेर भारतीय दुतावासमा गए । राणाहरूले सकभर फर्काउने कोशिस गरेका थिए । तर फर्किन नमानेपछि राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए र त्रिभुवनलाई सत्तात्युत गरिदियो। राणाहरूको त्यो कदमलाई ब्रिटिसले मान्यता दियो, भारतले दिएन। भारतले राजा त्रिभुवनलाई नै मान्यता दियो। २६ कात्तिकमा उनलाई हिन्दुस्तान लगियो ।
भारतले त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नुको मतलव राणाहरूलाई नमान्नु थियो । त्यसकारण ७ सालको क्रान्तिमा उसले राणाविरोधीहरूलाई सहयोग गर्ने नै भयो । सहयोगका लागि आर्मी र हातहतियार पनि दियो उसले । विराटनगरमा आक्रमण गर्नका लागि काठमाडौँबाट फौज हिँडाएर पुर्‍याउन सम्भव थिएन । फौजलाई रक्सौल पठाईयो, त्यसपछि गाडीमा गएर विराटनगरमा आक्रमण गर्न पुगिहाल्थे ।
राजाको कुसँगै नेकपामा फाटो
राजा महेन्द्रले कु गरेपछि हाम्रो पार्टी कस्तो नारा दिएर र कसरी आन्दोलनमा जाने भन्नेमै विभाजित भयो । र, नेकपा फाट्यो । पुष्पलालजीले सबैभन्दा पहिले राजासँग सिधै लड्ने कुरा उठाउनुभयो । त्यसलाई संक्षेपमा भन्ने हो नेपाली कांग्रेसको नारा थियो, विघठित संसद स्थापना गर्ने । हामीले त्यो नारा दिएनौँ । हामीले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको नारा दियौँ । हामीले त्यही संसद, जसमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत थियो, त्यसलाई स्थापित गर्ने नारा किन दिने? हामी नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा थियौँ। चुनाव गराउने प्रयत्न गरेर प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्नेगरी जाऔँ भन्ने हाम्रो भनाई थियो ।
संसद पुनर्स्थापनाको नारा दिने हो भने युद्ध नै गर्नुपर्ने स्थितिमा जानुपर्छ । त्यस्तो अवस्था हामीसँग थिएन । हामीसँग न हतियार, न कुनै तयारी । कसैको सहयोग पनि थिएन । भारतले सहयोग दिँदैन थियो। त्यसकारण केशरजंग रायमाझीसहित हामी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा गयौँ ।
पुष्पलालजी भने कांग्रेसकै पोलिसीमा अर्थात उहाँ चाहिँ विघठित संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहनुभयो। उहाँको आशय के थियो भने ७ सालको क्रान्तिमा हतियार उठाएर कांग्रेसलाई पूर्ण साथ दिन नसकेकाले हामीले फाइदा उठाउन सकेनौँ, अहिले पनि चुक्यौँ भने फेरि फाइदा उठाउन पाउँदैनौँ । त्यसै कारणले उहाँ कांग्रेसकै नारामा जान खोज्नुभयो । तर हामी भने त्यसमा जान मानेनौँ । यसमा मत बाझियो।
तर त्यो फरकपनका बीच उहाँको योजना भिन्दै रहेछ । यो सबै नाराको सवाल जति उठाएपनि कुरा अलग्गै कुरा थियो । उहाँको आशय त्यो अवस्थालाई उपयोग गरेर पार्टीको अधिवेशन बोलाऔँ र जसरी भएपनि तत्कालको नेतृत्वलाई हटाऔँ भन्ने थियो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट चुनिएका जो नेतृत्व थिए, त्यसलाई हटाउने उद्देश्य उहाँले लिनुभएको थियो । त्यतिबेला पार्टीका महासविच केशरजंग रायमाझी हुनुहुन्थ्यो।
पुष्पलालले हामीसँग आउन नौ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने सर्त राख्नुभयो । हामीले भन्यौँ,‘आखिर अहिले हामीलाई के चाहियो ? राजाले जुन तानाशाही काम गरे त्यसको विरुद्ध लड्ने र प्रजातन्त्र कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।र, पार्टीलाई कसरी कानुनी बनाउने भन्ने लडाईं हो । यसका लागि त प्रोग्राम बनाएर हामीले माग राखिसक्यौँ ।’
हाम्रो अर्को भनाई के थियो भने हामीले मुलुकभित्र लड्ने हो । भारतमा होइन । भारतमा बसेर लडेर मुलुकभित्रको आन्दोलनलाई सफल बनाउन सक्दैनौँ । कहिलेकाहीँ जाने आउने भन्ने अर्को कुरा हो । सिंगो लडाई नै हामीले उतैबाट लड्ने कुरा उचित होइन। लडाईँमा हाम्रा जनताले पनि भाग लिनुप¥यो भन्ने हाम्रो मत थियो।
पुष्पलालको एकलौटी नेतृत्व
वि.सं. २०१९ सालमा पुष्पलालले सबैलाई बोइकट गरेर अलग्गै अधिवेशन गराउनुभयो । पार्टीको तेस्रो पार्टी अधिवेशन थियो त्यो। केशरजंग रायमाझीसहित हामी कोहीपनि त्यसमा सहभागी भएनौँ। उहाँहरूबीच सहमति भएर होइन कि अलग्गै कमिटी बनाएर उहाँले यो निर्णय गर्नुभएको थियो। तर त्यो कमिटीबाट फेरि हार्नुभयो। त्यहाँ पनि तुल्सीलाल अमात्य महासचिव हुनुभयो । उहाँको एजेण्डा, उही संसद पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसमा उहाँले जम्मा १२ मत पाउनुभयो । महासचिवमा उहाँको नाम कसैले प्रस्ताव गरेन ।
तुलसीलालजीसँग उहाँको ६ वर्षसम्म झगडा चल्यो । उहाँ महासचिव हुन चाहनुहुन्थ्यो तर हुन नसकेपछि तुलसीलालजीसँग उहाँको विवाद भइरहन्थ्यो । फेरि पनि पुष्पलालजी उहाँको एजेण्डालाई कसरी पास गराउने भन्नेतिरै लाग्नुभयो। वि.सं. २०२५ तिर गएर पुष्पलालजीले तुलसीलालजीलाई हटाएर आफ्नो अलग्गै ६ जनाको कमिटी बनाउनुभयो। एउटा सम्मेलनबाट केन्द्रीय कमिटी गठन गरेर उहाँ आफैं महासचिव भएर आफ्नै कार्यक्रमको आधारमा हिँड्नुभयो। त्यो सबै कुरासँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै भएन । हामीलाई त उहाँले १९ सालमा नै छोडिसक्नुभएको थियो । २०२५ सालदेखि ३५ सालसम्म उहाँ आफ्नै किसिमले चल्नुभयो ।
कम्युनिष्टहरूले कमसेकम श्रीमतीलाई दासी र श्रीमान्‌लाई मालिक नठानुन्: स्वनाम साथी
नेपालमा रु ७० अर्बको औषधि खपत